Android လုလင်: January 2014
ကဲ ဘယ်​လိုလှုပ်​ရမလဲ စရ​အောင်​
အရင်​ဆုံး​ဆော့ဝဲကို အင်​စ​တောလုပ်​လိုက်​ပါ မ​ပြောလည်းလုပ်​မှာပဲ​နော်​.။
gallary ကို​ရွေးပြီး .................
ကဲ စိတ်​၀င်​စားရင်​ ဒီမှာ​ဒေါင်းပါ
ဒိုင်ယာရီရေးတတ်သူများအတွက် style note apk
ဒိုင်ယာရီရေးတတ်သူများအတွက် style note apk လေးပါ။
text အတွက် feature တွေနဲ့လည်းအသုံးပြုရမှာပါ။
လုလင်ပျိုတော့ တခါတလေ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေ
ကဗျာတွေရေးချင်တဲ့အခါ ဒီapk လေးနဲ့ပဲရေးတတ်ပါတယ်။
အရင်ကိုင်တဲ့ဖုန်းတုန်းက memo လေးနဲ့အဆင်ပြေနေပေမယ့် ခုဖုန်းပြောင်းလိုက်တော့ ပါလာတဲ့ Todo apk ကသိပ်မလန်းတာနဲ့စိတ်ညစ်နေတာ
ခုတော့ ဒီ style note လေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီလေ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့လည်း လုလင်ပျိုလိုဒိုင်ယာရီတွေရေးတတ်တယ်ဆိုရင်
Android ဖုန်းပေါ်မှာတင် video ကနေ mp3 ရအောင် Format ပြောင်းမယ်
Android ဖုန်းတစ်လုံးကတော့ တကယ့်စူပါကြီးပဲနော်။
ခုချိန်ခါမှာဆိုရင် mp3 ဖြတ်တောက်ပြီး ringtone လုပ်ဖို့အတွက်
စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ ဘာပဲလုပ်ချင်ချင် Android ဖုန်းတစ်လုံးရှိယုံနဲ့တင်လုံလောက်နေပြီနော်။
လုလင်တို့Phone service ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း
Apk နဲ့ root ဖောက်လို့ရနေပြီ
Apk နဲ့ cwm သွင်းလို့ရနေပြီ
backup and restore လုပ်ဖို့အတွက်လည်း apk တွေအဆင်သင့်
ဟောကြည့် Android ဖုန်းတစ်လုံးရှိတာဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်သလဲ
နောက်ဆိုရင် Computer တောင် တော်ယုံတန်ယုံလောက်ဆို အသုံးလိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်။
ဘာပဲလုပ်လုပ် android ဖုန်းရှိယုံနဲ့တင်လုံလောက်နေပြီကိုး။
ကဲ ထားပါ ဒါတွေက စကားစပ်လာလို့ ကြုံတုန်းလေးပြောရတာ။
video ကနေ mp3 ပြောင်းပေးတဲ့apk တွေများကြီးတွေ့ရပေမယ့် တချို့ကအဆင်မပြေ တချို့ကအဆင်ပြေပေမယ့်အွန်လိုင်းလိုတာနဲ့ ဒုက္ခတွေများလိုက်တာ
ဟော ခု apk လေးကတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။
တခြားက ကော်ပီယူထားတဲ့ ပို့စ်တွေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။
လုလင်ပျိုကတော့ဘာပဲတင်တင် ကိုယ်တိုင်ရေးတင်တာဆို တကယ်အသုံးဝင်မှတင်တာမို့ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရာခိုင်နှုန်းအဆင်ပြေတဲ့ video to mp3 converter ဆော့ဝဲကို အောက်မှာဒေါင်းလော့လုပ်ပါခင်ဗျာ။
Internal နည်းတဲ့ Samsung တွေအတွက်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် ဒီ apk လေးကတော့ application
တစ်ခုကို install လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်ထဲကို Install လုပ်မှာလည်းဆိုပြီးမေးပါတယ်..အဆင်ပြေကြမှာပါ..
သူကတော့ Root ဖောက်ထားမှသာလျှင်သုံးလို့ရမှာပါ...
သီချင်းနားထောင်တာဝါသနာပါသူများတွက် Music Player (Remix) ဆိုတဲ့ Android Player လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Player လေးကတော့ အသစ်လေးပါ တစ်ခါမှမတင်ဖူးသေးပါဘူး သူ့မှာပါဝင်တဲ့ Feature အချို့ကိုသဘောကျလို့ မျှဝေလိုက်တာပါ။ ဒီကောင်လေးက Android Phone မှာ သာမန်သီချင်း နားထောင်နိုင်တဲ့အပြင် အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိရုံဖြင့် Online မှ နိုင်ငံခြား နာမည်ကြီး Artists များရဲ့ Album များကို Free ဒေါင်းယူနိုင် ၊ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ Feature လေး ပါ။ အခြားသော Feature တွေကတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းသုံးရင်းကလိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အ ထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Viber မှာ Block လို့ လည်းရပီ အသံကိုလည်း ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားပီ ဆွဲချင်ရင်
ဒီအသစ်ကိုသာ ပြောင်းသုံးကြတော့ နှောက်ယှက်သူလည်း ဘလော့လို့ ရပီ
ပုံတွေလည်းအများကြီးပို့ ရပီ အသံကိုလည်း HD Quality နဲ့ လုပ်ထားပြီးပြီတဲ့
အသစ်ဟာ ဖလမ်းဖလမ်းထတာ သေချာတယ် အသုံးလိုသူများအောက်က
လင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူသုံးပါ။Play store သုံးရတဲ့သူ Update လုပ်လိုက်ပါ.။
Download - viber.ူlatest version .23-1-2014voip.apk
Android ဖုန်း အတွက် Ios7Launcher
Android ဖုန်း အတွက် Ios7Launcher လေးပါ
Update ထွက်​လာတဲ့ Zapya 2.1 ဗားရှင်းအသစ်​ မြန်​မာမှုပြုပြီးသား​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​
ကဲ zapya update version ထွက်​လို့တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
အားလုံးက Android ဖုန်းသုံး​နေသူများမို့ zapya ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ​ထွေ​ထွေထူးထူး​ပြော​နေစရာမလို​တော့ဘူး​
အဲ ဒါ​ပေမယ့်​​ပြောစရာ​တော့ အများသားဗျ။
ကျ​နော်​ လုလင်​ပျိုသည်​ Developer တစ်​​ယောက်​မဟုတ်​သလို Mobile thancanian တစ်​​ယောက်​လည်းမဟုတ်​ပါ။
ကျ​နော်​ လုလင်​ပျိုသည်​ ဘာ​ကောင်​မှမဟုတ်​ပါ။
ကျ​နော်​ လုလင်​ပျိုလည်း beginer တစ်​​ယောက်​ပါ။
သာမန်​ Android user တစ်​​ယောက်​ပါ ခင်​ဗျာ။
အခုတင်​​ပေးလိုက်​တဲ့ zapya update version 2.1 ဟာ မြန်​မာမှုပြုထားတဲ့မြန်​မာဗားရှင်းပါ။
မြန်​မာမှုပြုထားတာ ကျ​နော်​ လုလင်​ပျိုမဟုတ်​ပါ။
ဒီ​တော့ မြန်​မာမှုပြုထားတာ ကိုပြည့်​ဖြိုး​ပေါ့​နော်​။​လေးစားပါတယ်​ဗျာ။
ကျ​နော်​ လုလင်​ပျို​တောင်​အဲလို apk တစ်​ခုလုံးကိုမြန်​မာမှုမပြုတတ်​​သေးပါဘူး။
အင်​တာနက်​ဆိုင်​မှာလုပ်​ဖို့ကလည်းအချိန်​မ​ပေးနိုင်​လို့ တစိုက်​မက်​မက်​မလုပ်​ဖြစ်​​သေးတာကတစ်​​ကြောင်း​ကြောင့်​ ခုထိအဆင်​မ​ပြေ​သေးပါဘူးဗျာ။
အဲ အခု zapya မြန်​မာဗားရှင်းမှာ ကိုပြည့်​ဖြိုးက coding ပိုင်း​တွေကိုပဲ မြန်​မာမှုပြုထားတာ​တွေ့လို့ ကျ​နော်​လုလင်​ပျိုက icon ကို မြန်​မာအလံပုံ​လေးနဲ့ပြင်​ဆင်​ပြီး အထဲကတချို့​နေရာကပုံ​တွေကိုလည်းအနည်းငယ်​ပြင်​ဆင်​ထားပါတယ်​ခင်​ဗျ။
user default avater ကို​တော့ ကျ​နော့်​အချစ်​ဆုံး​မေသက်​ခိုင်​ပုံ​လေးထည့်​ထားပါတယ်​ ဟဲ ဟဲ
စိတ်​မပူပါနဲ့ကျ​နော့်​​မေသက်​ခိုင်​ကိုသူငယ်​ချင်းတို့မကြိုက်​ကြလည်း ကိုယ့်​ပုံကိုယ်​ချိန်းလို့ရတာပဲ​နော့။
ဟို​နေ့တုန်းကပဲ 2.0 ဗားရှင်းကိုတင်​​ပေးခဲ့တယ်​​နော်​။
အဲ​နေ့က​ပြောသလိုပဲ ခုဗားရှင်းကလဲ ဖုန်းအားလုံးနဲ့ကိုက်​ညီမယ့်​ connection error မဖြစ်​​တဲ့အပြင်​ မြန်​မာ icon နဲ့ မြန်​မာဗားရှင်းအဖြင့်​လန်းလန်း​လေးသုံးရမှာပါ။
မြန်​မာမှုပြုထားတဲ့ ကိုပြည့်​ဖြိုးက​တော့ 80% ပြင်​ဆင်​ပြီး​ရေးထား​ပေမယ့်​ လုလင်​ပျိုက ပုံ​တွေပါထပ်​ပြင်​ပြီးသားမို့ 90% ပြင်​ဆင်​ပြီးလို့​ပြောချင်​တယ်​ဗျာ။
မြန်​မာ icon နဲ့မြန်​မာဗားရှင်းဖြစ်​တဲ့ zapya update v2.1 ကိုလိုချင်​ရင်​ ဒီမှာ​ဒေါင်း​လော့ဆွဲပါခင်​ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 1:22 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
[root] Mobile Odin PRO v4.0 Full Version App ( Firmware: တွေကို ဖုန်းနဲ့တင် Flash လို့ရစေမယ့် Android ဖုန်း သုံး application )
Android device မှာcomputer မလိုပဲ ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကနေပြီး Firmware: တွေကို ဖုန်းနဲ့တင် Flash လို့ရစေမယ့် Android ဖုန်း သုံး application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က 16 ရက်နေ့ထွက် update လေးပါ- -ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုဖို့ မိမိဖုန်းဟာ rooted ဖြစ်ထားရပါမယ်- -ဒီ App ကို Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.mobileodin.pro မှာဝယ်ယူအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ £3.99 ပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊အခုဒီမှာတော့ Freee ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူသွားနိုင်ပါပြီ-
Live Wallpaper ကြိုက်သူတွေအတွက် Titanic 3D Pro live wallpaper ဖြစ်ပါတယ်.. ရုပ်ထွက်က ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး 3D ဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေများ လိုချင်ကြမှာ အမှန်ပါ.. ပင်လယ်ရေအောက်က Titanic သင်္ဘောကြီးနဲ့ ပင်လယ်ရေအောက် ရှုခင်းတွေကို အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ..
Factory Backup.apk ( ဖုန်းကို မူလစက်ရုံထုတ်အတိုင်း Backup ထားနိုင်မယ့် apk )
ဖုန်းကို မူလစက်ရုံထုတ်အတိုင်း Backup ထားနိုင်မယ့် apk လေးပါ။ Root Permission တောင်းပါတယ်...
Backup မှာ Partition အလိုက် backup ထားနိုင်ပါတယ်....။ Factory Reset လည်း
Myanmar Font and Root ကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်
ဒီရက်ပိုင်း Android OS ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် ဘာဆော့ဝဲရေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့
အခုမှဖုန်းစသုံးမယ့် user တွေရော ၊ သုံးနေကျ users တွေရောလိုအပ်မယ့်ဆော့ဝဲတစ်ခုကိုရေးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆော့ဝဲနာမည်ကိုတော့
MMAS Root & Font Installer လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးက ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုရင် ဖုန်းကို root လုပ်ခြင်း ၊ မြန်မာဖောင့်ထည့်ခြင်း ၊ မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်ခြင်းများကို MMAS Root & Font Installer တစ်ခုထဲနဲ့တင် ဖုန်းကို root လုပ်နိုင် ၊ မြန်မာ Font ထည့်သွင်းနိုင် ၊ မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
4.0 မှ 4.2.2 အထိ Google Application သွင်းနိုင်မယ့် apk လေးတွေ စုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
4.0 မှ 4.2.2 အထိ Google Application သွင်းနိုင်မယ့် apk လေးစုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဖုန်းမှာ Root Access ရှိရုံနဲ့ Google app ကို အလွယ်တကူ ကွန်ပျူတာမလိုဘဲ ဖုန်းထဲကနေ Install လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းပြီးသားလူတွေလည်းရှိမှာပါ မဒေါင်းရသေးသူတွေ အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Android ဖုန်းမှာVideo ရိုက်ရင်
စလိုက်မီးတွေ နဲ့ အခြား effect အမျိးမျိုးနဲ့လဲရိုက်လို့ရပါတယ်
လုပ်ထားပြီး လိုက်ကပြီးရိုက်ပေါ့ ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ
အောက်ကမီးရောင်ကာလာ Effect လေးတွေကနှိပ်ပြီးပြောင်းပေးလည်းရပါတယ်
V-Root apk for Android (ဖုန်းထဲမှာတင်Root လုပ်နိုင်သည်)
ဒီလောက်နာမည်ကြီးပြီး ဖုန်းတိုင်းနီးပါးကို Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ Vroot.exe ကို apk အနေနဲ့ထွက်
လာခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးထားတာ ခုတော့ တကယ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါပြီ....
ဒင်္ဂါးပြားလေးတွေတွန်းပြီးဆော့ရတဲ့ coin dozer ဗားရှင်းအသစ် v 3.2
ဒီဂိမ်းဆော့ဝဲကို လုလင်ပျို ဟိုတစ်နေ့တုန်းကပဲ ဒီနေရာမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ ကားရုပ်လေးပိုလာပါတယ်။
ကားရောင်းရင် coin 8ခု ရမှာပါ။
နောက်ပြီးတော့ coin များများကျရင် ဗျိုင်းရုပ်လေးပေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
Android os က Zapya နဲ့ Apple os(ios) Zapya အချင်းချင်း File transfer လုပ်နည်း
ဟိုတစ်နေ့က zapya နဲ့ပတ်သက်တာတွေ အကုန်သိရအောင်ဆိုပြီး ကျနော်လုလင်ပျုို ဒီနေရာမှာ(
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီနေရာမှာ (
) ဆိုပြီး တစ်နေ့ထဲ နှစ်ပုဒ်တင်ခဲ့တယ်နော်။
အဲတော့အခု ကျန်ရှိနေတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ Android os သုံး Zapya နဲ့ ios သုံး Zapya တို့ အချင်းချင်း File transfer လုပ်နည်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီမယ့် Zapya 2.0(cn) lasted update version
Zapya လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Android ဖုန်းသုံးသူတိုင်းမသိသူမရှိဘူးထင်ပါတယ်နော်။
Free call အတွက်ဆို Viber
Transfer အတွက်ဆို Zapya
Viber နဲ့ Zapya မပါရင် Android ဖုန်းမဟုတ်တောမယ့်အတိုင်းပဲနော်။
ဟုတ်ပါပြီ ထားပါတော့ ခုပို့စ်အကြောင်းလေးဆက်ကြရအောင်။
ခုထက်အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ zapya ဗားရှင်း v1.8 က တချို့ဖုန်းတွေနဲ့ချိတ်တဲ့အခါ အဝင်ရပေမယ့် အထွက်မရတာတို့ လက်ခံရပေမယ့် ဟိုဘက်ကိုပို့တဲ့ အခါကိုယ့်ဆီကအထွက်ပြပေမယ့် ဟိုဘက်ဖုန်းက အဝင်မပြတာတို့ ဖြစ်တတ်တယ်လေ။
Software Data Cable update ( for Android )
Zapya / FlashTransfer တို့လို့ Data တွေကို Share
ပေးနိုင်တဲ့ Software DataCable လေးကိုတင်ပေးလိုက်
ပါတယ်ခင်ဗျာ. ဒီကောင်လေးရဲ့အစွမ်းကလဲမသေးပါဘူး .
Zapya တို့လိုပဲ Data တွေကို Share တဲ့နေရာမှာအတော်
ဖုန်းသူခိုး ဖုန်းကိုင်လိုက်တာနဲ့အချက်ပေးမယ့် APK
ကဲအကိုရေ ဖုန်းသူခိုးရန်ကကင်းဝေးအောင်ဒီapk လေးဆောင်ထားလိုက်တော့နော်
မြန်မာဗားရှင်းကော အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကော နှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။
Android ဖုန်းပေါ်မှာတင် video ကနေ mp3 ရအောင် Forma...
Viber မှာ Block လို့ လည်းရပီ အသံကိုလည်း ပိုကောင်းေ...
Update ထွက်​လာတဲ့ Zapya 2.1 ဗားရှင်းအသစ်​ မြန်​မာ...
[root] Mobile Odin PRO v4.0 Full Version App ( Fir...
Myanmar Font and Root ကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်ဆော...
4.0 မှ 4.2.2 အထိ Google Application သွင်းနိုင်မယ့်...
V-Root apk for Android (ဖုန်းထဲမှာတင်Root လုပ်နိုင...
ဒင်္ဂါးပြားလေးတွေတွန်းပြီးဆော့ရတဲ့ coin dozer ဗားရှင...
Android os က Zapya နဲ့ Apple os(ios) Zapya အချင်းခ...
ဖုန်းအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီမယ့် Zapya 2.0(cn) lasted up...
ဆော့ဝဲရေးချင်သူများအတွက် Android App ရေးသားနည်းအဆင...
Google PlayStore,Gmail,Gtalk.... တွေကို 1-Click In...
Andriod ဖုန်း ဗီဒီယို ကာရာအိုကေ စာတန်းထိုး နှင့် V...
တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ စစ်တိုက်ချင်သူများအတွက် - C.H.A....
ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါအုံး (screen lock app )
ဒင်္ဂါးပြားလေးတွေတွန်းပြီး ဆော့ရမယ့် ဂိမ်းအလန်းလေး